EVENTS : New Book on Discover Japan; Trainees from Isshin International; New Hiragana Times Magazine; Playing Doraemon Travel Game; Come and Visit Japan Culture House.
New Book on Discover Japan at JCH
ဥရောပနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့ ဒီဇိုင်နာများနဲ့ ဒီဇိုင်းများအကြောင်းကို အထူးစုစည်းဖော်ပြထားတဲ့ Discover Japan စာအုပ်အသစ် ရောက်နေပါပြီ။　ဒီဇိုင်းအကြောင်း စိတ်ဝင်စားသူများ လာရောက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
北欧のデザイナーそしてデザインについて特集されているDiscover Japan 最新号が届きました。デザインに関心ある人、ぜひ手に取ってページをめくってみてください。
Trainees from Isshin International
ဒီနေ့ Japan Culture House ကို Isshin International မှ သင်တန်းသားများ လာရောက်ခဲ့ကြပြီး Origami နဲ့ Karuta ကစားနည်းများကို ပျော်ရွှင်စွာ ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်းလာလည်ပါနော်။
New Hiragana Times Magazine at JCH
ဂျပန်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် ထုတ်ထားတဲ့ Hiragana Times မဂ္ဂဇင်းအသစ် ရောက်နေပါပြီ။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကို ဂျပန်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးနဲ့ ရေးထားပါတယ်။ ဂျပန်စာလေ့လာနေသူများကို တစ်ခါလောက် ဖတ်ကြည့်စေချင်တဲ့ စာအုပ်ပါ။
Playing Doraemon Travel Game with Ms. Masayo
ဆရာမ Ms. Masayo နဲ့ ဂျပန်နေရာအသီးသီးကို လည်ပတ်ရတဲ့ Doraemon Travel Game ကို ကစားကြည့်နေပါတယ်။ ကစားရင်း ဂျပန်ရဲ့နေရာဒေသတွေကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘယ်သူနိုင်မှာပါလိမ့်?
Come and Visit Japan Culture House
အတန်းမစခင်နဲ့ ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ တစ်ထပ်တည်းမှာဖြစ်ပြီး အနီးနားမှာရှိတဲ့ JAPAN CULTURE HOUSE ကို လာရောက်လေ့လာကြပါ။ ဂျပန်ရဲ့စာအုပ်များ၊ ကာတွန်းစာအုပ်၊ မဂ္ဂဇင်း နှင့် ကစားစရာတို့ကို လက်တွေ့ ကစားနိင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ လာခဲ့ကြပါ။
နေ့စဉ် - နံနက် ၉နာရီခွဲ မှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိ
ပိတ်ရက် - အဂါၤနေ့ နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များ
授業の前後には、同じ階で近くに位置するJAPAN CULTURE HOUSEをご利用ください。無料で日本の書籍、漫画、雑誌や玩具に触れてもらえます。お気軽にお立ち寄りください。